အဘယ်ကြောင့်သင် Advertise သလဲ? - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homerayhab - မီးရထားသတင်းနှင့်လေလံပွဲအဘယ်ကြောင့်သင် Advertise သလဲ?
တူရကီနှစ်တွင် 2023, မြို့ 29, 25 တထောင်ကီလိုမီတာသို့မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား၏နိဒါန်းလိုင်း၏စုစုပေါင်းအရှည်ရောက်ရှိဖို့ရန်နှင့်အသစ်ရထားလိုင်းများနှင့် 250 ဘီလီယံနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စီစဉ်ထားသည်။ ယခုနှစ်အတွက်ဒီကိန်းဂဏန်း 2035 31 တထောင်ကီလိုမီတာရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလင့်များနှင့်အတူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများနှင့်ရထားလမ်းများအသုံးပြုမှုသိသိသာသာတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ကြိမ်အတွက်စီစဉ်ထားမြေအောက်ရထား, အလင်းရထားလမ်း, လမ်းရထား, တစ်လိုင်းပြေးရထားနှင့်ကြိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Progeria နှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဖို့အဓိကမြို့ကြီးများနှင့်မြို့ရွာနှင့်အတူအခြားအထွန်းသစ်စသောမြို့များကိုလက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကျွန်မရဲ့စောင့်ရှောက်မှု၏, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ 500 ဘီလီယံပမာဏသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေပါသည်!
ထိုကဲ့သို့သောအစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောကဏ္ဍတွင်သတင်းစာပညာ၏ဥာဏ်လမ်းညွန်ပေးစေခြင်းငှါ özenrayမီဒီယာ အဖြစ်, ရောင်ခြည်သတင်းများ'ငါတည်စေပြီ။ raillynews မှ rayhaber ကစီမံခန့်ခွဲမီးရထား, Ltd STI ကုမ္ပဏီ, teleferikhab နှင့် karayoluhaber özenrayကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုထည့်သွင်းပြီတကား
သငျသညျ cable ကိုကားများနှင့်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအကြောင်းကိုသတင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လက်ရှိရထားလမ်းစနစ်များ, ငါ www.rayhaber.co, စမ်းသပ်ခြင်း 2011 အတွက်ထုတ်လွှင့်, တရားဝင်ထုတ်ဝေ 01.01.2012 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ သင်ကနိုင်ငံတကာနယ်ပယ်တွင်အပေါငျးတို့သသတင်းလိုကျလြှောကျနိုငျအမျိုးသားရထားလမ်းစနစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ကနေ့စဉ်နှင့်လက်ရှိတင်ဒါများနှင့်ရလဒ်များကိုနောက်လိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကသတင်း, မြေပုံများဗီဒီယိုနှင့်ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်နဲ့အတူသန့်စင်အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုမှာရှိပါတယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ပေါ်တွင်ပြည်နယ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းအရသိရသည်ခွဲခွဲခြားငျတှေ့နိုငျပါသညျ! ကျွန်ုပ်တို့၏ site တစျထောငျ 60 25 စုစုပေါင်းနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများနှင့်နီးစပ်သောပါရှိသည်အခြားသတင်းအရင်းအမြစ်များကိုထက်အများကြီးချမ်းသာဖြစ်ပါသည်, အခမဲ့နေ့စဉ်သတင်းလွှာနှင့်အတူထက်ပို3တထောင်ရထားလမ်းလုပ်သားများထံသို့စေလွှတ်သည်။ ဒါ့အပြင် RSS ကိုအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှ 10 တထောင်တဲ့ subscribers အတိုင်းလိုက်နာတဲ့သူများစွာသောလူ, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်။
iCalendar Assisted နူးညံ့ / ဖြစ်ရပ်များပြက္ခဒိန်
22 ပျှမ်းမျှနေ့စဉ် updated သတင်း
25 တစ်နှစ်သတင်း archive ကို
အချိန် 11: အသစ်ကတင်ဒါများနှင့်လေလံပွဲရထားလမ်းစာစောင်၏ထုတ်ဝေသည်အထိ 00
ဘာသာစကား Options ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းများ 100 ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏မိခင်ဘာသာစကားအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းကိုလိုက်နာသူလူများနှင့်အေဂျင်စီများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။
Spaylaşımကိုလည်းလူမှုရေးကွန်ယက်နှင့်အတူထောက်ခံ RAYHAB ဖြစ်ပါသည်တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ကသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအသိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုးပွားစေသဖြင့်, ကြည့်ရှုမှုတိုးပွားလာနေသည်။
Facebook က: စာမကျြနှာ Rayhab 12K rayhab Group မှ 5K
တွစ်တာ: Levent Özen 14K
Instagram ကို: rayhab ဖြစ်ပါသည် 3K
Feedburner: rayhab ဖြစ်ပါသည် 10K
LinkedIn တို့: rayhab 30 ဖြစ်ပါသည်
တစ်နေ့လျှင် 60.000 ထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်များ
3.000 အီးမေးလ်က subscriber များအား
နိုင်ငံခြားပရိသတ်အတွက်လေ့လာနေပြည်ပမှာအနေဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကျယ်ပြန့်မှန်မှန်ကျွန်ုပ်တို့၏ site နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
တူရကီမှာတည်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး site ၏ 190.000 ခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၌ပထမဦးဆုံး 2.000 rayhab site ကိုမြင့်တက်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကမ်ဘာပျေါတှငျကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် 100.000 တူရကီအတွင်းပထမဆုံး 1.000 က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ Advertising ကြော်ငြာနှုန်း (2019)
အမြင်အာရုံ Banner Advertising ကြော်ငြာ× 678 60 pixels ကို
အဖျား အရွယ်အစား (pixels) နေရာ ကြေး (လစဉ် 12)
1.1 678 × 60 အဆိုပါလိုဂို၏ညာဘက် (အထူး) 4.000
1.2 678 × 60 ထိပ်တန်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် 2.500
1.3 678 60 × ခြောက်လခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် 2.000
အမြင်အာရုံ Banner Advertising ကြော်ငြာ× 325 60 pixels ကို
အဖျား အရွယ်အစား (pixels) ဖော်ပြချက်တည်နေရာ ကြေး (လစဉ် 12)
2.1 325 × 60 ကျန်ရစ်ကော်လံ £ 1.000
Advortorial စာသား / Advertising ကြော်ငြာ
အဖျား အရွယ်အစား (pixels) နေရာ အဖိုးအခ (ယူနစ်)
3.1 စာသားနဲ့အမြင်အာရုံ အပိုင်းအစသတင်းများ 100,00
သင်သည်သင်၏စာနယ်ဇင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ editor@rayhaber.co iletisim@rayhaber.co လိပ်စာသို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
T က: + 90 232 7000729
W က: ငါ www.rayhaber.co
ခိုင်ခံ့သောတိုက်ခိုက်ကြော်ငြာများမှစုစုပေါင်း Quartz မော်တော်ဆီ '' 03 / 04 / 2014 ကမ္ဘာ့ 5: အပြင်းစားတိုက်ခိုက်ကြော်ငြာများမှစုစုပေါင်း Quartz မော်တော်ဆီ '' ။ စုစုပေါင်းအကြီးဆုံးစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ပါတယ်အဆီများနှင့် ပတ်သက်. မိုင်းရေနံကပိုင်ဆိုင်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်စုစုပေါင်း Quartz အင်ဂျင်ပါဝါအများအပြားမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများကအတည်ပြုကြသည်, စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးဒေတာ 04 နှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တီဗီကရေဒီယိုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာတွေကတဆင့်စားသုံးသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်, ဧပြီ 2014 အပေါ်လေပါလိမ့်မယ်။ 150 ထက် သာ. ကမ္ဘာတဝှမ်းစုစုပေါင်းချောမွတ်စေနိုင်ငံတွေ, မော်တော်ကား, စက်မှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, စိုက်ပျိုးရေး, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရေကြောင်းကဏ္ဍတွင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။2သန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ပေးကြောင်းနည်းပညာများနှင့်သဟဇာတစားသုံးသူစုစုပေါင်း lubricants, နှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်နှစ်လျှင်ထုတ်ကုန်များ၏တန်ချိန်စွမ်းအင်နှင့် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖိနှိပ်မှုစာရွက်အဖြစ်ပုံမှန်အတိုင်းပုံနှိပ်ကြော်ငြာပစ္စည်းအလုပ် 14 / 03 / 2014 လေလံ AND SUBJECT ကို FOR သမားရိုးကျပုံနှိပ်ကြော်ငြာပစ္စည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါမှာအဖြစ်ဖိနှိပ်မှုစာရွက်၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီး။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Talatpaşaရိပ်သာလမ်း 06330 ရထားဘူတာ / Çankaya / တူရကီဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 0312 309 05 15 / 4319-4573 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 0312 311 13 06 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: alimkem ဖြစ်ပါတယ် @ tcdd.gov.t, f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: ဌာနခွဲ Manager ကိုပညာရှင်များခါးပတ် 1.2 ။ လေလံအထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုငျသညျ။ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလုပ်စုဝေး disassembly ၏ကြော်ငြာကိစ္စ္စ၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်မှ Wagon သတ္တုပါး (YHT, EMU, DMU သမားရိုးကျလှည်းတွေနဲ့သတ်မှတ်) 14 / 03 / 2014 လေလံ AND SUBJECT ကို FOR စုဝေး disassembly အလုပ်နူးညံ့၏သတ္တုပါးကြော်ငြာကိစ္စ္စ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Wagon ပြင်မျက်နှာပြင် Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီး။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Talatpaşaရိပ်သာလမ်း 06330 ရထားဘူတာ / Çankaya / တူရကီဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 0312 309 05 15 / 4319-4573 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 0312 311 13 06 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: alimkem ဖြစ်ပါတယ် @ tcdd.gov.t, f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: ဌာနခွဲ Manager ကိုပညာရှင်များခါးပတ် 1.2 ။ အထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုအပေါ်လေလံသတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ပုံနှိပ်နှင့်ပိုစတာဆွဲထားဖို့ Advertising ကြော်ငြာရာအရပျ 14 / 03 / 2014 ဖိနှိပ်မှုများနှင့်လေလံ AND SUBJECT ကို FOR အလုပ်နူးညံ့ကြော်ငြာပိုစတာဆွဲထားဖို့နေရာများကို TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီး။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Talatpaşaရိပ်သာလမ်း 06330 ရထားဘူတာ / Çankaya / တူရကီဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 0312 309 05 15 / 4319-4573 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 0312 311 13 06 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: alimkem ဖြစ်ပါတယ် @ tcdd.gov.t, f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: ဌာနခွဲ Manager ကိုပညာရှင်များခါးပတ် 1.2 ။ လေလံအထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုငျသညျ။ အပိုဒ် ...
Sanliurfa, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်3။ Advertising ကြော်ငြာပိုစတာတံတားမူရင်း (ဗီဒီယို) 18 / 03 / 2014 Sanliurfa, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်3။ အဆိုပါတံတားမူရင်းကြော်ငြာပိုစတာခဲ့: န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်က high-speed ကိုမီးရထားတံတားနှင့်အတူသတငျးကောငျးပေးထားခဲ့သောမတ်လ Sanliurfa အတွက်9အစ္စတန်ဘူလ်xnumx'üncကစီစဉ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကာလအတွင်းကဆိုသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်က high-speed ကိုမီးရထားတံတားနှင့်အတူသတငျးကောငျးပေးထားခဲ့သောမတ်လ Sanliurfa အတွက်3အစ္စတန်ဘူလ်xnumx'üncကစီစဉ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကာလအတွင်းကဆိုသည်။ ယင်း AK ပါတီစီးတီး9Bamyasu ထပ်တိုက်အဆောက်အဦဧရာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေမြို့ရိုး၏ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်များအတွက်အဖွဲ့အစည်းများကမကြာသေးမီကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင်အောက်ပါ Hung ခဲ့ကြသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန်နှင့် '' အစ္စတန်ဘူလ်3အပေါ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲငင်, 'တိကျမ်းစာ၌လာသည်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေတံတားလုပ်နေပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တံတား၏နိဒါန်းxnumx'üncမျှသိသာရှိကွောငျးကိုဖျောပွထားသညျ့Şanlıurfaအတွက်လုပ် ...
Metrobus ကြော်ငြာ 30 / 12 / 2015 Metrobus ကြော်ငြာ IETT ကြော်ငြာအာကာသအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့က output ၏ဘတ်စ်ကားကြော်ငြာတွေပြင်မျက်နှာပြင်အကြားအပြေးအဆိုပါ Metrobus လိုင်း။ တရားဝင်ပြန်တမ်းယနေ့ပြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် 250 ဘတ်စ်ကား၏ခေါင်းစဉ်မှတက်ဦးဆောင်ကြော်ငြာများအရ "ပိုက်ဆံကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လယ်ပြင်သစ်ကြော်ငြာမျက်နှာ advertising ငှားရမ်းခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအောင်နှင့်ကြော်ငြာအာကာသသုံးစွဲဖို့လက်ျာ၏ငှားရမ်းနှင့်အတူဘတ်စ်ကားကြား၌အလုပ်လုပ်နေသော Metrobus လိုင်း၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်၏ကြော်ငြာဧရိယာနူးညံ့ငှားရမ်းထားပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သော" ကြော်ငြာအာကာသနှင့်ပြောသည်ရှိရာဧရိယာ၏သစ်ကိုကြော်ငြာမျက်နှာ5တထောင်ကိုအပိုင်းပိုင်း။ နု၏ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ် 1 933 တထောင်ပေါင်ပေါင်း KDV သန်းရှိခဲ့သည်။ အတူကန်ထရိုက် ...
တတိယတံတား, အ Advertising ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ (ဗီဒီယို) 25 / 08 / 2016 တတိယတံတား, အ Advertising ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပွဲတော် Published:3။ တံတားကြော်ငြာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်3100 ကျော်ခုနှစ်သည်ကြော်ငြာဆောင်ပုဒ်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ကိုပြင်ဆင်အသစ်တခု Herald ပေးထားခဲ့သည်။ အဲဒီကြော်ငြာအသေးစိတ်ကို ... တတိယတံတား, ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပြီးစီးခဲ့တူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံး prroje တဦး။ အသစ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်စီမံကိန်းများနှင့်ကြော်ငြာရုပ်ရှင်၏အဖွင့်နေ့စွဲအများကြီးအကြောင်းကိုစကားပြောပုံရသည်။ အမျိုးသားပြဿနာရှိခြင်းသည့်အခါ4ကြော်ငြာကြွေးကြော်သံများရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားမှာတံတား conveys ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတံတားပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှကမ္ဘာကြီးဆွေမျိုးထဲမှာအမြင့်ဆုံးတံတား, သုည၏အမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုသွားနိုင်စွမ်းတတိယတံတား, တံတားကမ္ဘာပေါ်မှာအင်ဂျင်နီယာများ၏ပျက်ကွက်ရာပေါင်းများစွာသည် ...
Metrobus turnstiles ကြော်ငြာအာကာသအဖြစ်ရောင်းစားနေကြသည်။ 17 / 02 / 2012 နေ့တိုင်း Metrobus နှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း turnstiles ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာကအသုံးပြုနေကြသည်အစ္စတန်ဘူလ်လျှပ်စစ် Tramway နှင့်စစ်ဆင်ရေး၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (IETT) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအတွက်ကြော်ငြာအာကာသအဖြစ်ရောင်းချကြပါတယ် 36 လကြာကြော်ငြာအာကာသအဖြစ်အသုံးပြုရန်ငှားရမ်းခဲ့ပါသည်, ထို Metrobus လိုင်းနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိဘူတာရုံ, တံခါးဝမှာပြင်ပမျက်နှာပြင်များပြန်သွားလေ၏။ ကြော်ငြာအာကာသအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကို 249 လကြာသတင်းစာများ၏ဒီနေ့ရဲ့ပြဿနာ, အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 36 ၏ Metrobus လိုင်း turnstiles ၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘူတာရုံများနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဝင်ပေါက်တွင်ပါရှိသောချေးငှားမှုနိုင်ရန်အတွက် IETT အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနုကြေညာချက်အရသိရသည်တရားဝင်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 28 2012 IETT အထွေထွေသည်အထိနူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုကိုမှပေးစာ ...
YHT Advertising ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဂရိတ်အတိုးနှုန်း 06 / 08 / 2018 YHT Advertising ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဂရိတ်အတိုးနှုန်း: ယုတ္တိဗေဒထောက်ရယ်စရာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုစီးပွားဖြစ်ရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိသော, surly အအေးနှင့်အပျင်းစရာကြော်ငြာကနေ TCDD အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) အကောင့်။ Advertising ကြော်ငြာအချိန်တိုအတွင်း၌ကြီးသောအတိုးကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။ ဒါကလက်ရာမြောက်သောပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုကို: 2019 updated မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ။ တူရကီအတွက်လျင်မြန်စွာရထားလမ်းနှင့်ရထားနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်-Eskisehir ဖြစ်ပါသည် - တူရကီနှင့် Konya လမ်းကြောင်းအတွက်အလွန်မြန်ဆန်စွာခရီးသွားလာ။ အစာရှောင်ခြင်းရထား 200 320 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာနှင့်အတူပျမ်းမျှအတွက်ဦးဆောင်ယူပါ။ တူရကီကနေအစ္စတန်ဘူလ်ယခု 4.5 နာရီကြာတဲ့ကာလအတွင်းရောက်ရှိပါစေ။ ရထားအလွန်အဆင်ပြေမြန်ဆန်နေကြသည် ...
အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ် Advertising ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပွဲတော်လူမှုမီဒီယာ Salla ရှိပါတယ် 24 / 10 / 2018 အဖွင့်မှီတစ်ပတ်, နယူးလေဆိပ်မှ HDI, အစ္စတန်ဘူလ် "အောင်ပွဲခံမော်ကွန်းတိုင်" ရေးရာကြော်ငြာရုပ်ရှင်ထုတ်လွှင့်ရရှိခဲ့သည်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှစိတ်အားထက်သန်စွာသစ်ကိုလေဆိပ်၏ဖွင့်ပွဲတစ်ပါတ်ထက်လျော့နည်းဘို့အစ္စတန်ဘူလ်၌ နေ. စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ လေဆိပ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လျက် iGain နှင့် 25 အားလုံးအမျိုးသားရေးတီဗီချန်နယ်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်မနေ့ကညနပေိုငျးရုပ်ရှင်၏ပွဲမှသက်ဆိုင်ရာမဟာအဖွင့်အဘို့ပြင်ဆင် 29 အောက်တိုဘာလရီပတ်ဘလီကန်ကြော်ငြာ၏အနှစ် - လူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းများအတွက်ထုတ်ဝေခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ အောက်တိုဘာလအစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်, အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး၏ကြော်ငြာရုပ်ရှင်၏ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးအိမ်ရှင်မနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏နံနက်ယံ၌အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုံခြုံရေးအစောင့်ဂုဏ်ယူစွာပြင်ဆင်ထား 29 ...
ဆရာသင်တို့ကိုငါအမြဲအလွန်ကောင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့တစ်သံလမ်း၌ရှောက် site ကိုရှိသျောလညျးသငျဆိုက်ရဲ့မြင့်မားတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နဲ့ကျွန်မသင်ဤအလုပ်လက်မဲ့တားဆီးဖို့အလှူငွေပေးလျှင်တောင်းဆိုမှုအရာရှိများတူရကီအတွက်အလုပ်လက်မဲ့ဒီ site ထဲမှာအလုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီများရှိကိုသိစေခြင်းမှsizdeğerlမဘယ်တော့မှတစ်ဦးသံသယ site တစ်ခုအာမခံသင့်ရဲ့ var.siz ပျောက်ဆုံးနေ ပိုကောင်းolmazmıအလုပ်အကိုင်အလုပ်ရမယ့်အလုပ်ရှိတယ်ညာဘက်ဤကဲ့သို့သောişciစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Verne ရဲ့ site တစ်ခုအတွက်ကိုပဌနာနှင့်သင်ငါကတ်ကြေးကို set up အလုပ်ရှာနေအလုပ်သမားလမ်းမပေါ်တွင်bıranjစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငါ၏အအလုပ်အကိုင်မီးပူဘယ်မှာဖိုရမ်မှ add သောငါ၏သညျဟုထငျထိုနောက်ငါbıranjငါအပေါ်လောကအတွက်, ကိုယ့်ကိုယ်ကို, elektiro နှင့် reyiltek thermite အိုးထောက်ပံ့ရေး၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုရပေမယ့် ငါသည်သင်တို့ကိုဤအမှု၏သင့်အကဲဖြတ်ပေးလျှင်ငါသည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်အရာရှိတစ်ဦးတို့က Umeda များအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေတစျမြိုးကနေအလုပ်တောင်းဆိုချက်ကိုမတှေ့နိုငျသညျ, ငါဤဥပဒေသငျသညျသတင်းအချက်အလက်ပူဇော်
Levent Özen ဟုသူကဆိုသည်:
ခိုင်ခံ့သောတိုက်ခိုက်ကြော်ငြာများမှစုစုပေါင်း Quartz မော်တော်ဆီ ''
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလုပ်စုဝေး disassembly ၏ကြော်ငြာကိစ္စ္စ၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်မှ Wagon သတ္တုပါး (YHT, EMU, DMU သမားရိုးကျလှည်းတွေနဲ့သတ်မှတ်)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ပုံနှိပ်နှင့်ပိုစတာဆွဲထားဖို့ Advertising ကြော်ငြာရာအရပျ
Sanliurfa, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်3။ Advertising ကြော်ငြာပိုစတာတံတားမူရင်း (ဗီဒီယို)
တတိယတံတား, အ Advertising ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ (ဗီဒီယို)
Metrobus turnstiles ကြော်ငြာအာကာသအဖြစ်ရောင်းစားနေကြသည်။
YHT Advertising ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဂရိတ်အတိုးနှုန်း